အလန့်တကြား ဖြစ်​ကြရ​တော့မယ့် အ​ရေးတစ်​ခု – Kyaw Zaw Oo's Blog
September 24, 2019 January 13, 2020 kyaw zaw oo
အလန့်တကြား ဖြစ်​ကြရ​တော့မယ့် အ​ရေးတစ်​ခု
ရခိုင်​ပြည်​တွင်​းမှာ မူးယစ်​​ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု အကြီးအကျယ်​ များပြား မြင်​့မားလာတဲ့ကိစ္စ။
မ​နေ့ညက စစ်​​တွေမြို့သူ ညီမငယ်​တစ်​​ယောက်​က ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​မှာ​ ပို့စ်​တစ်​ခု​ရေးတင်​တယ်​။ စစ်​​တွေအပါအဝင် ရခိုင်​ပြည်​က မြို့​တွေမှာ မူးယစ်​​ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ​တွေ​ကြောင်​့ သုံးစွဲသူ​တွေကိုယ်တိုင်​​ရဲ့ဘဝ​တွေ ရိရွဲ့ယိုယွင်​းပျက်​စီးရတဲ့အပြင်​ သက်​ဆိုင်​ရာ မိသားစု​တွေရဲ့ဘဝ​တွေကို ဘယ်​​လောက်​ပြင်​းပြင်​းထန်​ထန်​ ထိခိုက်​ကြရသလဲ ဆိုတာကို ရိုးရှင်​းတဲ့စကား​တွေနဲ့ ရိုးသားစွာခံစားရတဲ့ နာကျင်​မှု​တွေနဲ့ သူမ​ရေးသားထားတယ်​။ သူမ​ရေးတင်​ပြီး (၁၁) မိနစ်​အကြာမှာ ကျွန်​​တော်​ ထပ်​ဆင်​့ မျှ​ဝေ share ခဲ့ပါတယ်​။
တစ်ခါက မနှစ်​က ​ကျွန်​​တော်​့​အောက်​ အသက်​(၁၅) နှစ်​ခန်​့ငယ်​တဲ့ ညီငယ်​တစ်​​ယောက်​က ကျွန်​​တော်​့ကို ​လေး​လေးနက်​နက်​ ​ပြောဖူး​မေးဖူးတယ်​။ စစ်​​တွေနဲ့တကွ ရခိုင်​မြို့​တွေမှာ လူငယ်​​တွေရဲ့ မူးယစ်​​ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဟာ ​ကြောက်​မခန်​းလိလိ ပျံ့နှံ့ ဖြစ်​ပျက်​ လို့ရှိ​နေတယ်​။ အစ်​ကိုတို့ အခုမျိုးဆက်​မှာ ရခိုင်​ပြည်​ကို တည်​​ဆောက်​ဖို့ ကြိုးစားလို့ ​အောင်​မြင်​တယ်​ ထားပါဦး အစ်​ကိုတို့ထားခဲ့တဲ့ ရခိုင်​ပြည်​ကို ဆက်​လက်​တည်​​ဆောက်​ဖို့ လူ​တွေ မရှိ​တော့ပဲ ဘိန်​းစား​တွေချည်​းပဲ ကျန်​ခဲ့ရင်​ ရခိုင်​ပြည်​ကို ဘယ်​လို ဆက်​လက်​တည်​​ဆောက်​ကြမလဲ လို့ သူက​ပြောပါတယ်​။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်​ရာ ရာသီဥတုယိုယွင်​းပျက်​စီးမှု (climate crisis) အ​ရေးကို တိုက်​ပွဲဝင်​သူ Greta Thunberg လို့ အမည်​ရှိတဲ့ အသက်​ (၁၆) နှစ်​အရွယ်​ ဆွီဒင်​ ​ကျောင်​းသူ​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ မနှစ်​က သြဂုတ်​လ ဆွီဒင်​ ပါလီမန်​​ရှေ့မှာ တစ်​​ယောက်​တည်​း ထိုင်​ဆန္ဒပြရာကစပြီး သူ့​မရဲ့အဆက်​မပြတ်​ အ​ရေးဆိုမှု တိုက်​ပွဲဝင်​မှု​တွေ​ကြောင်​့ climate change အ​ရေးမှာ သက်​​ရောက်​မှု​တွေ မထင်​မှတ်​ဖွယ်​ရာ ကြီးမားသထက်​ကြီးမားလာတယ်​။ ဒါကို အခု Greta effect လို့ ​ခေါ်ကြတယ်​။
Greta ကို မလိုလားသူ ရန်​သူများစွာ ရှိလာတဲ့အ​လျောက်​ သူမအ​ပေါ်​ပြောကြတဲ့ မလိုတမာ ​ကောလဟာလအချို့နဲ့ပတ်​သက်​လို့ ​ရေးသားရှင်​းလင်​းချက်​တစ်​ခု ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​မှာ​ရေးပါတယ်​။ ​ရေးသားချက်​ရဲ့ ဆိုလိုရင်​း​တွေထဲက တစ်​ခုက – ”I want you to panic” ဆိုတဲ့စကားပါ။ လူသားအ​ပေါင်​းအ​နေနဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်​သက်​လို့ ထိတ်​လန်​့တကြား ဖြစ်​ကြတာမျိုး ကျွန်​မက ဖြစ်​​စေချင်​တယ်​လို့​ ကျွန်​မက ​ပြောခဲ့​ရေးခဲ့ရင်​ အမှန်​တကယ်​ ထိတ်​လန်​့တုန်​လှုပ်​ရမယ်​့ အခြအ​နေကို ​ရောက်​​နေလို့ ​ပြောသင်​့တဲ့စကားကို ကျွန်​မ ​ပြောတာဖြစ်​တယ်​လို့ သူမက ဆိုပါတယ်​။
စစ်​​တွေမြို့နဲ့ ရခိုင်​ပြည်​တစ်​ဝှမ်​းမှာ ကပ်​​ရောဂါဆိုက်​သည်​့ပမာ ကြီးမားစွာ သက်​​ရောက်​ဖိစီးလာတဲ့ မူးယစ်​​ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများအ​ရေးကို မ​နေ့က Khin Yatanar Thein ​ရေးသားတဲ့ သတင်​းစကားကို အချက်​​ပေး​ခေါင်​း​လောင်​းထိုးသံအဖြစ်​ မှတ်​ယူကြဖိုလိုပါတယ်​။ ဒီ​ခေါင်​း​လောင်​းသံ​ကြောင်​့ ကျွန်​​တော်​တို့အားလုံး ထိတ်​လန်​့တကြားဖြစ်​ကြရပါမယ်​။ ကြီးကျယ်​စွာ မီး​လောင်​​ကျွမ်​း​နေတဲ့ အိမ်​ထဲကလူလို အိမ်​ပြင်​ကိုအရင်​ဆုံး​ပြေးထွက်​၊ အိမ်​ထဲကလူ​တွေ မိသားစုဝင်​​တွေ အကုန်​လုံးအိမ်​အပြင်​ကို ​ရောက်​မ​ရောက်​ စိစစ်​​၊ မ​ရောက်​​သေးရင်​ ကယ်​ထုတ်​နိုင်​ဖို့ကြိုးစား၊ ပတ်​ဝန်​းကျင်​အကူအညီကို ရယူ . . . စသည်​ဖြင်​့ အမြန်​ဆုံးတုံ့ပြန်​လုပ်​​ဆောင်​ဖို့ လိုအပ်​တဲ့ ထိတ်​လန်​့တကြား ဖြစ်​ကို ဖြစ်​ရ​တော့မယ်​့ အ​ခြေအ​နေ ဖြစ်​ပါတယ်​။
မခင်​ရတနာသိန်​း ထိုးတဲ့​ခေါင်​း​လောင်​းသံကို ကျွန်​​တော်​ ထပ်​ဆင်​့ထိုးပါတယ်​။ သူမ​ရေးသားတဲ့ မူရင်​းပို့စ်​ကို ဤသည်​မလွဲ ​အောက်​မှာ ထပ်​ဆင်​့ ကူးယူ​ဖော်​ပြထားပါတယ်​။
၂၀၁၉ စက်​တင်​ဘာလ (၂၄) ရက်​
စစ်တွေမြို့ … ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး … တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘိန်း/အစိ လုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံး …
ေဩာ် … ကိုယ် သူဌေးဖြစ်ရင်ပြီးရော ကျန်တဲ့ လူတွေ ၊ မိသားစုတွေ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကရောလား ? ကိုယ့်မိသားစုထဲကမဟုတ်ပဲ ဆွေမျိုး ၊ အသိတွေထဲမှာ
ဆေးစွဲနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိနေရင်တောင် အရမ်း ကိုယ်ချင်းစာတယ် ဘယ်လောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်ရလဲ ?
မိဘတွေ ဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲရလဲ ? ဘယ်အချိန် စိတ်ဖောက်မလဲ … ဘယ်အချိန် ပိုက်ဆံပြတ်ရင် ခိုးမလဲ …
အပြင်က ညသန်းခေါင် ဘယ်အချိန်ပြန်လာမလဲ … ထမင်းရော စားဖြစ်ရဲ့လား … အပြင်မှာ တစ်ခုခုများဖြစ်နေပီလား … ဘယ်အချိန် ဖုန်းဆက်လာမလဲ … စခန်းရောက်နေပီလား … ဆေးစွဲတဲ့လူရှိတဲ့အိမ်ဆို တစ်အိမ်လုံးနီးပါး အိပ်ရေးဆပ်သွားကြတယ် … တံခါးသံကြားရင် ေဩာ် … ငါ့သားများလား၊ငါ့အကိုများလား၊ ငါ့မောင့်များလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အအိပ်မဖြောင့်ကြပြန်ဘူး … တခါတလေ ၁လ ၂လလောက် အိမ်ကနေ ပျောက်သွားပြန်ရော … ပိုက်ဆံပြတ်လို့ အိမ်ပြန်လာရင် အရုပ်တောင်မပေါက်လို့
အိမ်သားတွေ မြင်တာကိုနဲ့ စိတ်ဆင်းရဲကြရတယ် …
ပိုက်ဆံတောင်းရင်လည်း မပေးဘူးလို့ စိတ်တင်းထားပြန်လည်း မပေးရင်လည်း ဝမ်းနည်းပြန်ရော … ေဩာ် ငါ့သား မသုံးရလို့ ခန္ဓာတွေကိုက်နေမလား တစ်ခုခုဖြစ်သွားမလား စိတ်ပူကြပြန်တယ် … ဒါတွေကို သိတဲ့ ဆေးcompanyပိုင်ရှင်တွေကတော့ အပျော်ကြီးပျော်ကြတာပေါ့ … ဆေးသမားတွေ သုံးစရာပိုက်ဆံမရှိတော့ရင် ရောင်းစားခိုင်း ၊ Carry လုပ်ခိုင်းပီး နည်းနည်းစီ ပေးသုံးထားတယ် သူတို့တွေက အေးဆေးပေါ့ … တခါတခါဆို ဘာမှမရှိတဲ့ဘိန်းစားတွေကို SUP တို့ Land C တို့လို ကားနဲ့ အိမ်ရှေ့ထိလာခေါ်ကြတာလည်း အမြင်ပဲ … ဘာလုပ်ဖို့ခေါ်ကြလည်း အသိဆုံးပေါ့ … မပြတ်နိူင်တဲ့သူကတော့ လိုက်သွားရစမြဲပဲ …
မိဘတွေမှာတော့ အဆင်ပြေပါစေကြောင်း လျော့တခါ ၊
ခြောက်တလှည့်နဲ့ မတည်မှန်းသိတဲ့ ကတိတွေ ခဏခဏပေးတာတွေတောင် အမြဲယုံစမြဲ ယုံမြဲ …
တချို့မှာဆို လင်မယားနှစ်ယောက်ရောင်း လင်ကစွဲ မိန်းမကလည်းထပ်ရောင်းမြဲ သားစွဲ ၊ သမက်စွဲ
ရောင်းကြပြန်တယ် … တချို့ဆို တစ်မိသားစု တမျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးတွေ လုပ်ပီး လူကိုလူလို့မမြင်တာတွေမှ ကိုယ့်ရှေ့မှာတပုံ …တချို့ဆို သူများသားသမီးဖြစ်ချင်တာဖြစ် ကိုယ့်သားသမီးတွေကျ ဒီမှာတောင် မထားဘူး ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ ထားကြပြန်တယ် … သုံညကနေစလို့ ဘာမှမရှိတဲ့ လူရောင်းပစေ … လုပ်ပီးလို့ ငါ့ဘဝအတွက် ငါ့မိသားစုအတွက် ဖူလုံပီဆိုတဲ့အချိန် ရပ်ကြလေနော် … သိထားရမှာက မိဘတွေအားလုံးကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်နဲ့ နင်တို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ နင်တို့ တစ်မိသားစုလုံး အများဆုံး စားနိူင်လည်း ဒီတစ်ဘဝပဲ … ဒီချမ်းသာမှုကို နောက်ဘဝသယ်ချင်ပါ”တယ်ဆိုတောင် မရဘူး သေရင်တောင် ပိုက်ဆံတစ်သိန်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့ လူရှိလိုလား ၊ ဘိန်းလုပ်ပီး အောက်ခြေလွတ်နေတဲ့ လူတွေ နင်တို့လို မလုပ်တက်လို့ မချမ်းသာဘူး မထင်ကြပါနဲ့ …
အခုက စစ်တွေမြို့ ၃ပုံ၂ပုံက သူဌေး … ရောင်းတဲ့လူကလွှဲ ရှိသမျှ ယောကျ်ားတွေက ဘိန်းစား … မြို့ကျတော့
မွဲခြောက်ခြောက် … သုံးမကုန်ပါဆိုတဲ့ နင်တို့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ကိုယ့်မြို့အတွက်ရော အကျိုးပြုနိူင်မဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုပြန်လုပ်ပေးဖူးလား ??? သူများမြို့တွေမှာဆို မြင်ဖူးပါတယ် တကယ်ကြိုးစားလို့ ချမ်းသာသွားရင်တောင် ဘဝမမေ့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်မြေကို
ပြန်အထောက်အပံ့ ပေးကြတဲ့သူတွေ … ကြားဖူးကြပါတယ် ‘ ဝဋ်ကြွေး ‘ ဆိုတာ ဆပ်လို့လည်းမကုန်ပါဘူး … ဘဝတောင်မကူးသူတွေတောင် ရှိကြပါသေးတယ် …
စားခဲ့ရလားဆိုတော့လည်း မစားခဲ့ရပဲ သေသွားတဲ့ ငါတစ်ကဲကဲနေတဲ့ သူဌေးတွေ … ဝဋ်ကနောက် ချမ်းသာမှာက အခုလို့ ခံယူထားကြလို့လည်း ဒီချမ်းသာမှုကို လုပ်ယူနေကြတာပေါ့ … နောက်ဆိုသုံးတဲ့လူတွေကို အပြစ်မမြင်တော့ပါဘူး … သူတို့ ခင်ဗျာ မသုံးချင်ဘူးလို့ တိကနဲ့ ဖြတ်ပစ်လို့ရတဲ့ အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ …
အိမ်တိုင်းရာရောက်လာခေါ်တဲ့ လူတွေကလည်း ရှိနေတော့ …
ခံရသူ အဟောင်း … ပြုသူက အသစ်တဲ့ …
မိသားစုများကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်နဲ့စာကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်နှစ်ဘဝစားနိူင်ကြမှာလဲ ??????
PS . မနေ့က ဆုံးသွားတဲ့ အသိအကိုတစ်ယောက်ကြောင့်ပါ …
ကျန်နေတဲ့ မိသားစု ၊ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစု ဘယ်လောက်ပူဆွေးရလဲ နင်တို့ သားတွေအလှည့်မှ ကိုယ်ချင်းစာနိူင်ကြပါစေ ….
Khin Yatanar Thein
Previous တိုင်းရင်းသား​တွေ ဗမာကျွန်​မဖြစ်​​စေရဘူးလို့ ​ဗိုလ်​​အောင်​ဆန်း ​ပြောဖူးတယ်
Next စစ်​​တွေ​ဆေးရုံ၊ press opportunity